Accueil > Gazetin'ny nosy > Ambalavao : Misy nitifitra ny sefo Cisco vaovao
Ambalavao : Misy nitifitra ny sefo Cisco vaovao
Ny asabotsy faha 02 novambra 2019 teo dia maty voatifitra ny olon-tsy fantatra ny vehivavy iray izay zaobavin’ny sefo Cisco vaovao ao Ambalavao Tsienimparihy antsoina hoe Rasoanandrasana Aurelie. Tamin’ny alakamisy faha 31 oktobra 2019 izy no nanao fandraisana ny toerany maha sefo Cisco azy ao Ambalavao.
Ny zoma 01 novambra 2019 dia nandeha tany Fianarantsoa izy nandevina ny zokin’ny vadiny. Tsy afaka nody izy ny asabotsy faha 02 novambra 2019 io fa ny zandriny lahy sy ny vadiny no nasaina niambina ny trano sy ny mpanampy azy. Mitovy vatana amin’ity sefo Cisco vaovao ity zaobaviny izay maty voatifitra ity.
Tokony ho tamin’ny 7 ora hariva dia poa-basy no nitranga tao amin’ny tokotanin’ilay Sefo Cisco Rasoanandrasana Aurelie. Lasibatra tamin’izany ilay zaobaviny izay voalaza eo ambony ka maty tsy tra-drano.
Ny vinavina mandeha rehetra dia mirona amin’ny famonoana ilay sefo Cisco vaovao fa tsy ity zaobaviny ity velively.
Efa eo ampelatanan’ny pôlisy ao Ambalavao Tsienimparihy ankehitriny ny raharaha ka ho hita ny tohiny. Ny vinavina rehetra ataon’ny olona aty Ambalavao dia mirona amin’ny olona tsy faly amin’ny fanendrena ity Rasoanandrasana Aurelie ity avokoa ka izao nitetika ny hamono hahafaty azy izao. Voalaza fa niadiana mafy ity toerana ity ka izao niafara amin’ny fikendrena ny hamono ny ankilany izao.
Ny sefo Cisco no nokasaina hovonoina saingy ny zaobaviny no maty. Mafy ny te hahazo toerana ka tonga hatrany amin’ny famonoan’olona izao.